LifeStyle – XB Media Myanmar
၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိ လောက်အောင်ပါပဲ
၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း ၆ နှစ်သားလေး တီးနေတယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ Video – မန္တလေး ခန့်ထည်အောင် ဆိုင်း…
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရ ခြင်း ၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု
July 2, 2021 Bestie_Author
ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် ကိုယ်အားကိုးနိုင်တယ်။ ဆိုးချင်သလို ဆိုး နိုင် မယ်။ ချွဲလို့ရတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ကိုဆရာတောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနဲ့ကလေး စုံတွဲတိုင်းတော့ ဒီလိုဖြစ် ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ ။ သေချာတာကတော့ ဦးအရွယ်တွေက ကိုယ့်ထက် ဗဟုသုတများမယ်။ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖို့ သူတို့က ဆုံးမနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ် ခေါက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦး နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ် နော် (1) သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်ပြောဆရာ ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ ပုံပြင်ပြောဆရာလို့ ဘာလို့ပြောရ တာလဲဆိုတော့ သူက သင့်ကို သူ့ဘဝမှာ ကြုံခဲ့တဲ့ အရာတွေကို စီကာပတ်ကုံး ပြောနိုင်လို့ပါ။ သူရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ သူသိခဲ့တဲ့ လူတွေအကြောင်း စတာတွေကို ပြောပြတဲ့အတွက် သင့်မှာ ပုံပြင်ပြောပေး မယ့်လူ ပိုင်ဆိုင်သွား ပါပြီ။ သူက သူ့ဗ ဟုသုတ တွေကို ပြောသလို သင်ပြောသမျှကိုလည်း အချိန်ယူပြီး နားထောင်ပေးမှာပါ။ သင့်အတွက် သူ့အချစ်က ဘယ်လောက်ကြီး…
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝ မှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ် ကြည့် သင့်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး
June 5, 2021 Bestie_Author
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝ မှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတခုကို တခါတရံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုက် ကြည့် ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ ပျိုမေတို့ရေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင် ပါတယ်။ (၁) တယောက်တည်းခရီးတွေ ထွက်ပ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ တယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာဟာ အနည်းငယ်စွန့်စားရတဲ့ ကိစ္စတခုဆိုပေမယ့် တယောက်တည်းခရီး သွားခြင်းကနေ ထင်မထားလောက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်တာကြောင့် လုံခြုံဘေးကင်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နေရာဒေသတခုခုကို တ ယော က်တည်း ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ (၂) တရက်လောက် ဖုန်းမသုံးဘဲ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းကြည့်ပါ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို ဖြတ်ပြီး ဖုန်းအသုံးမပြုဘဲ နေကြည့်ဖို့ဆိုတာဟာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတခုတော့ မ ဟုတ်ပေမယ့် အားလပ်ရက်တရက်မှာ ဖုန်းကိုလုံးဝမသုံးဘဲ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလေးတွေ လုပ်ရင်း တနေ့တာအချိန်ကို ဖြတ်သန်း ကြည့် သင့်ပါတယ်။ ၃) ဖက်ရှင်စတိုင်ပြောင်းတာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ ဆံပင်စတိုင်ပြောင်းလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဝတ်နေကျ ပြင်ဆင်နေကျ နေ့စဉ်…
ခြေ ချောင်းလေးတွေက ပြောတဲ့ သင်ရဲ့စိတ်နေသဘော ထား လေး တွေက ဘာတွေလဲ…
May 3, 2021 Bestie_Author
ခြေချောင်းလေးတွေတစ်ခုချင်းဆီကပြောပြနေတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေ ခြေချောင်းလေးတွေတစ်ခုချင်းဆီကပြောပြနေတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ခုချင်းဆီက ပြောတဲ့ စာဖတ် သူတို့ ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကို နည်းနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ခြေမခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်တာ တော်တယ်၊ ဉာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်းမှုစွမ်းရည်ကောင်းတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။တစ်ခုခုဆို အာရုံစိုက်နေဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် သင့်လုပ်ရမယ့်အရာ မပြီးမချင်း သင်မနားတမ်းလုပ် လေ့ ရှိ တ တ်တယ်။ခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုသေးနေရင်တော့ သင်ဟာ စွယ်စုံရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲ လုပ်တတ်တဲ့သူပါ။ ၂။ ခြေညိုးသင့်ရဲ့ ခြေညိုးလေးက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရည်အချင်းရှိ တယ် ။ လူတွေကို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ရာမှာ တော်တယ်။လုံ့လရှိတယ်။ဝိရိယရှိတယ်။ သင်ယုံကြည်တဲ့အရာအပေါ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တယ်။ သင့်ရဲ့ ခြေချောင်းက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုတိုနေရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ကိုယ်တင် ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲတယ်။ ၃။ ခြေခလည် (သို့) တတိယခြေချောင်းဒီခြေချောင်းက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ရှည်နေရင် သင့်မှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပြည့်ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင်ဟာ တော်တယ်။အောင်မြင်တယ်။ သင့်ရဲ့အဲဒီခြေချောင်းက သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက်…
April 27, 2021 Bestie_Author
လောကကြီးမှာ လူအများစုက ညာသန်တွေဖြစ်ပါတယ်။လူအနည်းစုကသာ ဘယ်သန်တွေအဖြစ် ရှိနေပြီး သူတို့ဟာ အဖိုးတန်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေ၊ဘယ်သန်တွေမှာသာရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 1.ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်-ဘယ်သန်တွေကားမောင်လိုင်စင်ဖြေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်နိုင်ကြပြီး စစ်တမ်းတွေရဲ့အ ဆို အ ရ ဘယ်သန်တွေရဲ့ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းဟာ တစ်ကြိမ်ထဲနဲ့အောင်မြင်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကျော် ဖော်မြူလာဝမ်းပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Senna နဲ့ Rossi တို့ဟာ ဘယ်သန်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ 2.ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်တယ်-စစ်တမ်းများအရ ဘယ်သန်များဟာ အခြားသူများထက် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုရှာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ 3.စာရိုက်တာပိုမြန်တယ်– ဘယ်သန်တွေစာရိုက်ရင် ပိုနှေးမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ညာသန်တွေထက်စာရိုက်ပိုမြန်တာကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘယ်သန်တွေစာလုံးရေ (၃၄၀၀)လောက်ရိုက်ပြီးချိန်မှာ ညာသန်တွေက (၄၅၀)လောက်ဘဲရိုက်နိုင်ပါတယ်။ အခုအသုံး ပြုနေကြတဲ့ ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်လက်ကွက်တွေကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ Christopher Latham Sholes ဟာ ဘယ်သန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ 4.ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ပိုတော်ကြတယ်-နောက်ဆုံးအမေရိကန်သမ္မတ၅ယောက်မှာ ဂျော့ဘုရှ်ကလွဲလို့ အားလုံးက ဘယ်သ န်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သန်များက ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်ချုပ်နေပြီး ပြသနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ပိုမိုထူးချွန်နေကြတာ မွေးရာပါအရည် အချင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 5.အားကနည်းမှာ သူများတွေထက် ပိုထူးချွန်ကြတယ်-လက်ဝှေ့ထိုးရာမှာ ဘယ်သန်က ပြိုင်ဘက်ကို ကောင်းကောင်း အနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်။ တင်းနစ်ကစားရာတွင် ဘယ်သန်ကစားသမားမှ ဆာဗင်ပေးလိုက်ပြီး ညာသန်ကစားသမားမှ ပြန်လည်ရိုက်ပုတ်ရာတွင် အကြီးအကျယ်ဒုက္ခ ရောက်စေပါတယ်။ထို့ပြင်…
အသည်းနင့်နေအောင်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး
April 25, 2021 Bestie_Author
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ခန့်မှန်းရခက် ပါတယ် ။ အကြောင်း ကတော့ စိတ်ထဲရှိတာက တစ်ခြား၊ အပြုအမူက တစ်ခြားဖြစ်နေတတ် လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းဂရိုစိုက်ခံချင်၊ အရမ်းအချစ်ခံ ချင်တဲ့ သူတွေပါ။ အဲလို ဂရုစိုက်၊ အချစ်ခံရအောင်လည်း နည်း မျိုး စုံနဲ့ကြိးစား တတ်ကြ ပါတယ်ဗျာခုဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ ချစ်သူ အပေါ်မှာ ဆိုးပေမယ့် တကယ်တမ်း ရင်ထဲမှာကျတော့ နင့်နေအောင် ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ(၅)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးတွေက ကလေးဆန် တာလေး ကလွဲရင် သင့်အတွက် အစစအရာရာ ပြည့်စုံတဲ့ သူဖြစ်လို့ လက်လွှတ် မခံသင့် ပါဘူး နော် (၁) ဒေါသကြီးတတ်တယ် ဒီလို မိန်းကလေးတွေက ဒေါသ အရမ်းကြီး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဒေါသကြီးတာကလည်း သင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ ပဲဖြစ် ပါတယ်။သင်နဲ့ပ တ် သ က်ရင် အသေးအမွှားလေးက အစ အရမ်းဂရိုစိုက်တတ်တဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့်၊ ဖုန်းမဆက်တာလေး၊ စာမပြန်တာလေးက အစ သူ့အ တွက် အရမ်းစိတ် ထိခိုက် ရပါတယ်။ဝမ်းနည်းသွားတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ကို ဒေါသအဖြစ်…
တော်လည်းတော်ချောလည်းချောတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရည်းစားမရှိရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
တော်လည်းတော် ချောလည်း ချောတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရည်းစားမရှိရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ဒီနေ့လို ခေတ်မျိုးမှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရည်းစားတွေ ရှိနေကြပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အချိန်ကနေ လူငယ်အရွယ်တွေ အ သီးသီးမှာ ကိုယ်စီ ချစ်ရသူတွေနဲ့ လက်တွဲနေကြချိန်မှာတစ်ချို့မိန်းကလေးတွေ ကတော့ တစ်ကိုယ်တည်းပဲ single အဖြစ်နဲ့ ရှိနေကြပါ တယ်။သူများတွေနဲ့ မတူဘဲ Single ဖြစ်နေတာက သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ သူတို့မှာ ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် Single ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရည်းစားရှိတယ်လို့ အထင်ခံရလို့ ချောတဲ့ ကောင်မလေးတွေ အများစုကတော့ သူတို့ကို ရည်းစားရှိတယ်လို့ အမြဲ အထင်ခံရလေ့ ရှိပါတယ်။သူတို့ကို ရည်းစား ရှိမယ်လို့ ယူဆ ကြ လို့ သူတို့ကို ရည်းစား စကား အပြောမခံရတော့တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ဒီအတွက် သူတို့တွေက ရည်းစားရဖို့ မလွယ်ကူကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ (၂) ရှိန်လို့ တော်တဲ့ ကောင်မလေးတို့၊ ချောတဲ့ ကောင်မလေးတို့ဆိုရင် လူအများက အလိုလို ရှိန်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်လူနဲ့မတူသလိုလည်း ဆက် ဆံ ခံ ကြရ သလို…
သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့်အမူအကျင့် (၆) မျိုး
April 16, 2021 Bestie_Author
သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့် (၆) မျိုး လူတစ်ယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဏန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ပြောချင်တာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝနေလို့၊ ပိန် နေ လို့၊ ရုပ်ဆိုးနေလို့၊ စတိုလ်က ဂွမ်းနေလို့ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုအပြင်ပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဏန်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မရှိဘူးဆို တာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။ဒါကြောင့် သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမှုအကျင့်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. ပွင့်လင်းပါ၊ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ ပွင့်လင်းပါဆိုတာ နေရာတိုင်းကို အကုန်လုံးလိုက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ၊ပြောပါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ – ပိုက်ဆံမချမ်းသာပေမယ့် ပိုက် ဆံ ရှိချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုး၊ အမှားလုပ်မိပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင် ဝန်မခံတာမျိုး ဒါတွေက သူများသိသွားရင်လည်း မကောင်းသ လို သင့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ပြောချင်တာက သင့်အရှိအရှိတိုင်း ပုံစံအစစ်အမှန်ကိုချပြပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေပါ။အဲ့ လို နေခြင်းက လူတွေသင့်ကို ပိုလေးစားလာပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိလာမှာပါ။ ၂. နားထောင်ပါ သင်ပြောချင်တာကိုပဲပြောမယ် သူများပြောတာလည်း လက်သင့်မခံသလို သူများပြောတာလည်းနားမထောင်ပေးဘူး။ဒါတွေက သင့်ရဲ့ဆွဲ ဆောင်မှုကို အရမ်းလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူများနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ သင်ကလည်းပြော သူများပြောတာကိုလည်း သေချာနား ထောင်ပေးပါ။ ၃. ပြုံးပါ၊ ရယ်ပါ အပြုံးလေးတွေက လူအချင်းချင်းကူးစက်သွားတဲ့…
ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေကို လုံးဝလျှော့မတွက်သင့် တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
April 13, 2021 Bestie_Author
ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေကို လုံးဝလျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက် တစ်ခါတလေမှာ ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာဘဝကိုလေးလေးနက်နက်မရှိဘူး၊ ခံစားချက်မရှိဘူးလို့အထင်ခံရတတ်ပါတယ် ။ဒါ ပေမယ့်လည်း ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေကို လုံးဝလျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) လူတွေရဲ့စိတ်ကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ် ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲ နေတတ်တဲ့သူတွေလို့ ထင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။အသေး စိတ် ကအစ ကောင်းကောင်းဝေဖန်သုံးသပ်တတ်တဲ့ သူတွေပါ။ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ စိတ်ကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးတွေ နောက် ကွယ်မှာ ဘယ်သူကောင်းလဲ၊ ဘယ်သူဆိုးလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ (၂) ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိတယ် ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ ဒီလိုပေါတောတောနေလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။သာမန်လူတွေတောင် မခံစားနိုင်လောက်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်းရှိနေ တတ်ပါ တယ်။ (၃) လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ် ပေါတောတောနေတဲ့သူတွေဟာ လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ပျော်အောင်လည်း တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။လူ တွေကို ပျော် ရွှင်စေချင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ပြီး ပေါတောတောနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်တလမ်းကနေ လူသား တွေ ကို အကျိုးပြုနေတဲ့သူတွေပါ။ (၄) တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံစားတတ်တယ် ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်မပြတတ်တဲ့သူတွေပါ။ဘယ်လောက်ပဲ ဝမ်းနည်းနေပါစေ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ခံစားမယ့်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေနဲ့ဝေးရာမှာတစ်ယောက်တည်း ခံစားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အရာရာကိုပေါ့ပျက်ပျက်တွေး တတ်တဲ့သူတွေလို့မထင်ပါနဲ့ အရမ်းကိုထိခိုက်ခံစားလွယ်တဲ့သူတွေပါ။ (၅)…
အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ
April 5, 2021 Bestie_Author
အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုချစ်သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ချစ်သူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရင်၊အရာအား လုံးကို ဂရုစိုက်ရင်၊ မျက်နှာတစ်ချက်အညိုမခံဘဲလိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးကိုရထားတဲ့မိန်းကလေးကို အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။တကယ်တော့ အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလိုလူမျိုးကိုရထားတာကို ခေါ်တာပါ။ (၁) ကိုယ့်အပေါ်ပွင့်လင်းတဲ့သူ အချစ်ရေးမှာ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေမရှိဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့သူမျိုးပါ။ကိုယ့်အကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမြဲတမ်းပွင့် ပွင့် လင်းလင်းပြောပြနိုင်တဲ့ချစ်သူမျိုးပေါ့။ (၂) ကတိမဖ်က္တဲ့သူ ကတိတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်မပေးတတ်တဲ့သူ၊ ပေးပြီးသားကတိကိုလည်း လွယ်လွယ်နဲ့မဖျက်တတ်တဲ့သူမျိုး၊ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာ အမြဲ တမ်း ကတိတည်တဲ့သူမျိုးပါ။ (၃) အပြောနဲ့မဟုတ် အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သူ ချစ်တာကို အပြောနဲ့သက်သေမပြဘဲ၊ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတတ်တဲ့သူမျိုး၊အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ချစ်သူစိတ်ဆင်း ရဲအောင် မလုပ် တဲ့သူမျိုးပေါ့။ (၄) အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့သူ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ စွန့်ခွာမသွားတဲ့သူ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ချစ်သူကို ကာကွယ်ပေးတတ်သူ၊ ချစ်သူကို အထိအခိုက်မခံဘဲ ကာကွယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ (၅) ချစ်သူကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သူ ဘယ်အရာနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ပြီးရွေးချယ်ရပါစေ ကိုယ့်ချစ်သူကိုပဲ အမြဲဦးစားပေးရွေးချယ်တတ်တဲ့သူ၊အရာအားလုံးထက် ချစ်သူကိုပထမဦးစား ပေး အ ဖြစ် ရွေးချယ်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (၆) ကိုယ့်ချစ်သူကိုထောက်ခံအားပေးတတ်သူ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေတိုင်းကို ထောက်ခံအားပေးတတ်သူ၊ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင် နောက် ကွယ်ကနေ ထောက်ပံ့ကူညီပေးတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ ချစ်သူကိုရထားရင် အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းတဲ့ သူလို့ သေချာပေါက်ပြောရမှာပါ။ Credit